imishini Heating design yesimanje ivumela isakhiwo ukunikeza ukushisa endaweni enkulu futhi izakhiwo ezimbonini nge izimfuno eliphezulu kuya ukusebenza izinkomba sezulu. Kodwa endabeni ka izindlu zangasese nezindawo zokuhlala amandla onekusasa akuyena ngaso sonke isikhathi umbandela esiyinhloko Ukukhetha. Ngokwesibonelo, ukunikeza Malosemeika ezincane yezakhi lokuqala compactness, futhi lapho supply zokuxhumana amayunithi ekotishi noma efulethini eliphezulu kuyinto yobuhle ukwaneliseka kanye nomklamo nezidingo zesifundo. izimfuneko ezinjalo luhambisane Zehnder radiators, okuyinto owaziwa sokwenza ngqo oqine Ukushisa imisebenzi. umkhiqizi German ukhiqiza imishini e ukucupha ehlukahlukene, okuvumela amakhasimende ukuthenga imodeli ofanele kakhulu isicelo sakho.
ulwazi olujwayelekile mayelana Zehnder radiators
The Inkampani igxile imishini ingxenye, okuyinto kuhlanganiswe amanzi ashisayo bafudumale system. Empeleni, kuba nomqondo radiators bendabuko, kodwa nge twist zanamuhla. Ngesisekelo lokubolekwa ka okwakha izinto eziyinsimbi, ezakhiwe izigaba eziningana. Onjiniyela ezifaneleke ngokucophelela zobuchwepheshe of imishini ukuvikelwa evele. Naphezu amandla steel radiators ijabulise Zehnder ngaphansi ukusetshenziswa kakhulu kungenziwa ngaphansi izinqubo yembubhiso. Ukuvimbela lokhu mkhuba, umenzi ubeka lokubolekwa amaseshini amaningi kusebenzeke ngaphandle. Ezigabeni zokuqala is bahlanza evele, kulandele primer ngesineke ngu electrostatic powder koqweqwe lwawo. Ngo esigabeni sokugcina wenziwa antistatic nolokugcina ukwelashwa ukushisa.
Umugqa ethandwa kakhulu ubhekwa Charleston, ngakho Ukucaciswa kwakhona ngco nekuphindze ubasite ekuhlanganiseni lonke uhlelo. Ububanzi ejwayelekile izici kuyinto 4.6 cm, kuyilapho ukuphakama izigaba ufinyelela cm 180. Ngamunye iphaneli kurediyetha Ubuye ikhanda metal 1.5 mm ukujiya. Isibalo izigaba kungaba ezahlukene kuye ngokuthi version - uhla ejwayelekile kuhluka izakhi 4 kuya ku-12. Yiqiniso, ngombono yomsebenzisi izinkomba ukusebenza ebaluleke kakhulu ukuthi ahlinzeke Zehnder radiators steel ezimweni yokusebenza elilungile. Ngokuqondene namandla, kuba 188 W i version eziyisisekelo. Kuyinto kancane, nababhula ngezinkanyezi namuhla boilers, yebo, bonisa negalelo umxhwele nakakhulu, kodwa izidingo isilinganiso efulethini idolobha kuyoba okwanele. izilungiselelo lokushisa zihlukile, kodwa esiphezulu 120 ° C. Circuit ingcindezi - 10 ibha.
Amamodeli ayatholakala imiklamo eziningana, bobunjwa, oyinhloko phakathi okuyinto bendabuko iphaneli ukwakhiwa. Ngaphandle izinguqulo ezinjalo ziyindawo ngehele amapayipi, Nokho, okuyinto, has a ukubukeka ekhangayo. Kuyinto ngenxa ukubukeka yobuhle radiators German abakwazi imaski nokusebenzisa nakusolwa - abazi konakalisa isitayela wezangaphakathi ngisho neqhaza umklami yabo shades. Ikakhulukazi kulabo kubasebenzisi abafuna ukugxila nje umphumela design by ukusebenza kwesakhiwo engavamile, ukunikela abaklami ukulungiswa nge ukuma okungavamile. Lokhu engaba kanye engela Zehnder imodeli. Radiators yohlobo yokuqala zihlukile design lwalugobile ne ukunquma nentaba oyindilinga. ugobile nemingcele zingase zehluke, kodwa izigaba ezintathu zokuqala zihlale komugqa. Corner onobuhle ngokuvamile esetshenziselwa ukufakwa emafasiteleni bay. Kits yakha engeli ku ezahlukene 90-179 degrees.
Against isizinda ukuvela ikhiqize kakhudlwana kubhayela lesithando amayunithi nge usayizi encane ekilasini njengoba radiators enjalo kancane kancane ziyafa, hhayi withstanding mncintiswano. Nokho, ochwepheshe isiJalimane ngokulwela ukulondoloza nesithakazelo kule niche ngokuthuthukisa amamodeli bacondze etindzaweni letehlukene. Ikakhulukazi, ukuklanywa lokubolekwa yesimanje kusho ukuthi kungenzeka esikhundleni izakhi ngabanye Zehnder. Radiators zokukhekheleza amenable kokubuyekeza isicelo ukuthi kwandisa ukuphila kwabo inkonzo. Wathi enamathela oluvikelayo koqweqwe lwawo ekhethekile futhi kunikeza izinzuzo eziningi - isibonelo, zonke evele etholakalayo okugeza kuwo. Kungakhathaliseki izinga lokushisa kusukela enamathela kuphela ekhethekile akusho bungakhiphi izinto ezilimazayo, + ngakho radiators ingasetshenziswa ezindaweni okuhlalwa kuzo.
izindlela sesipholisanjini uxhumano
Lena ngesinye isici imishini German. A ezihlukahlukene izinketho zokuxhuma wenabisa ububanzi kwesicelo echibini ukushisa futhi kwenza kube ukufakwa elula. Njengoba umkhuba ubonisa ukusetshenziswa athandwa kakhulu kuba uhlobo lateral ukumisa evumela futhi umsipha ne yesikhuphukeli ezimaphakathi nezwe, bese yokuhlala wiring amapayipi. Uma kungenzeka zisebenzisa okuningi obunganakekile ezambiwa ephansi, kodwa kulokhu ngeke akwenze ngaphandle ukusetshenziswa ekhethekile thermostat valve Zehnder. Radiators kungenziwa kuxhunyiwe ngenhla. Lolu khetho ubhekwa elula kancane futhi akuthandeki, kodwa kwezinye izimo ikhambi enengqondo kunazo kungaba ncamashi lokhu kucushwa. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi uxhumano esetshenziswa nomkhiqizi inikeza ngaphezu thermostat ekhethekile. Le divayisi ivumela nje kuphela ukuba alawule futhi ukulawula nemingcele yokusebenza iyunithi ngokuzenzakalelayo.
okubuyayo phezu radiators
Radiators, njengoba enjalo, siyigugu umthengi usayizi amancane ukubukeka emnandi. Kuyinto kulezi zici, futhi kubeka nomkhiqizi Zehnder. Radiators ayatholakala ezahlukeneyo ezahlukene wesitayela ukuthi, eqinisweni, udonsa ingxenye enkulu kanti nabantu abahlosiwe. Futhi, abanikazi abaye bakuncoma ngayo elula nephumelelayo uhlelo lokulawula. Zonke electronics nezilawuli awayindwayo ngokunembile futhi enokwethenjelwa. Lapha kuyazuzisa ukugcizelela nokwethenjelwa nokuvikeleka. imishini German kuyaqabukela kuphakamisa ukungabaza mayelana izinga kanye umkhiqizo Zehnder kuqinisekiswa isibonelo imikhiqizo yabo.
Njenganoma izimfanelo ezinhle zalesi imishini, izici ezingezinhle operation awo kuvela kakhulu umcabango we-idivayisi. Sesipholisanjini njengoba imishini Ukushisa ekuqaleni kubhekwa izakhi isesekeli, ngakho-ke akakwazi ukunikeza amandla anele ukuba ezindaweni Ukushisa umnyuziki ezinkulu. Noma kunjalo Zehnder Charleston radiators abasakwazi ezifanele ukusetshenziswa ku amafulethi nezindlu ezincane. Njengoba for nye izici ezingezinhle, kungenzeka ukuba uqaphele izindleko eliphezulu, okuyinto emabangeni isilinganiso kusukela 16 kuya kwezingu-20. Hlikihla.
Indlela ukukhetha imodeli kakhulu?
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukunquma isidingo Ukushisa uzifanise amathuba radiators. Uma imishini kungaba kwakuthiwa ukuqinisekisa ukuqaliswa imisebenzi kuhlelwe ke ungakwazi uqhubekele ukukhethwa. Eqinisweni, kufanele aqondiswe zindlela ezimbili eziyinhloko - nekusebenta ezishisayo kanye umklamo. Ngokwezinga elithile izici ezihlobene nobukhulu, ukufakwa kulahlwa, ezithinta ukusebenza kwabo. Ngokwesibonelo, 14-sectioned radiators ijabulise Zehnder ukwazi ukusebenza ezingeni lokushisa esiphezulu 120 ° C. Ukuze yokushisa esiphezulu enikeziwe, kumele nayo ibukwe nezinketho ngokuya ukuma. Kwezinye izimo-ke kuyoba ilungiselelo kunenzuzo odongeni yendabuko, futhi ezindaweni amancane samuntu emincane ye ngokuphumelelayo imisebenzi yayo.
Steel design Sectional Ukushisa izakhi kube yilolu suku kukhona ikhambi ekahle ukusetshenziswa zokuhlala. Njengoba esinye sezibonelo engcono imishini angathathwa kurediyetha Zehnder Charleston Completto, elihlanganisa isikhalazo kanye nomklamo, futhi high nomthelela ezishisayo. Ngokuqhathaniswa okunye Ukushisa izinhlelo amayunithi ezinjalo cishe akakubangeli enkingeni okuqukethwe. Abanaso zidinga umsebenzi ukugcinwa kanye Sigcizelela izicelo ubuncane ngokuya ukunakekelwa sanitary futhi ihlanzekile. Nalapha futhi, ngokukhethekile antistatic ukwelashwa emizi ukulondolozwa nasenkathazweni wokuhlanza kusuka uthuli kungenzeka esikhundleni lula lwezigaba ngabanye aqede isidingo uxhumane esikhungweni sesevisi ukulungisa.
Boilers "Buderus" - ukubuyekezwa. Buderus: odongeni-agibele amahhashi gas okokubilisa
15 izikole amahle kakhulu emhlabeni